Update Date ဒီဇင်ဘာ 22, 2020 .2mins read
ကိုဗစ်ကြောင့် အိပ်မပျော်ခြင်း Coronasomia
အိပ်စက်ခြင်းပညာရှင်တွေကတော့ ကိုရိုနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အိပ်မပျော်တာကို နာမည်လှလှလေး ပေးထားပါတယ်။ Corona ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ insomia Coronasomia ပါတဲ့။
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဩဂုတ် 13, 2021 .3mins read
သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင် ကို အခုလို မြှင့်တင်ပါ။ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကို များများရစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 18, 2021 .2mins read